Egwuregwu akwụ ụgwọ kachasị ewu ewu maka Mac | Esi m mac
Na mbido izu a, ewetere m gị nhọrọ The iri kasị aga nke ọma free egwuregwu maka Mac, ndepụta nke, ma eleghị anya, agbanweelarị n'ihi na ọ dabere na ihe ndị nta akụkọ na-ekwu ma ọ bụ ihe masịrị m, kama na mmasị nke ndị ọrụ, ya bụ, ndị a bụ egwuregwu efu ndị ọrụ kachasị budata.
Taa, anyị ga-enye ọkwa ahụ ntụgharị iji lekwasị anya egwuregwu iri kachasị akwụ ụgwọ maka Mac, nke ahụ bụ, egwuregwu kachasị ebudata mgbe ịlelechara ihe nke, ma eleghị anya, nwere uru ka ukwuu ebe ọ bụ na ọ bụghị anyị niile dị njikere ịkwụ ụgwọ maka ihe niile. Cheta na nke a abụghị nkwanye post, ma ọ bụ a n'elu nke kasị mma ya mere, ọ bụ karịa yikarịrị ka otu n'ime ndị a egwuregwu abụghị ma ọ bụ na ị na-atụ anya. N'okwu a, ma ebe ọ bụ na a na-akwụ ha niile ụgwọ, cheta na ị nwere ike ịga n'ihu weghachite ha wee weghachite ego gị. Olee banyere anyị na-amalite?
1 Ihe Nzuzo nke Monkey Island: Mbipụta puru iche
4 Obodo Lumino
5 Imeri 2
6 Ezigbo Esther Landmark Edition
7 SimCity 4 Ọkachamma Edition
8 Napoleon: Total War - Gold Edition
9 F18 Ntọala ụgbọelu
10 Xnumx siri ike
Ihe Nzuzo nke Monkey Island: Mbipụta puru iche
The "Nzuzo nke Enwe Island" bụ ọhụrụ version mere site Aspyr Media, Inc. otu nke kpochapụwo homonous egwuregwu tọhapụrụ na 1990. will ga-ewere njirimara nke protagonist na ị ga-enwe ịchọpụta "fabulous nzuzo nke enwe agwaetiti"; Iji mee nke a, ị ga-enwerịrị ntụkwasị obi nke ndị na-apụnara mmadụ ihe na Mêlée ka a duru gị gaa "Isle of Monkeys na-atụ egwu na akụkọ mgbe ochie, njem nke ga-ezu ike ọkpụkpụ nke ọbụna onye na-agba ọbara ọbara."
Machinarium bụ egwuregwu dị iche ebe ndị eserese na-ewere oke kachasị. Họrọ dị ka kacha mma egwuregwu n'ihi na Mac ugbua na 2011, yana "egwu kacha mma nke afọ" site PC Game, Machinarium ọ na-anọgide na nke abụọ ọnọdụ nke ndị kasị ewu ewu na-akwụ ụgwọ egwuregwu maka Mac.
E hoputara otu n'ime egwuregwu kacha mma nke afọ na 2013, The Cave bụ egwuregwu egwuregwu nke ị ga - achịkọta otu ndị njem atọ na asaa nke ndị kachasị dị iche iche, "nke ọ bụla nwere akụkọ nke ha na akụkọ pụrụ iche", iji gbadata omimi di omimi ma chọpụta ebe di egwu dị ka n'okpuruala ogige ntụrụndụ, onye ọzọ ochie ochie.
Obodo Lumino Ezubere ya maka ụlọ kachasị nta, yana maka ndị na-eto eto. Ọ bụ ihe gbasara a mgbaghoju anya dabeere njem egwuregwu nke ị ga-amalite site na ịgagharị obodo ahụ na iji amamihe gị enyere ndị bi na ya aka. Ubi dị na mbara igwe, ụlọ elu ndị gbapụrụ agbahapụ na nnukwu elekere mmiri ma ọ bụ ụlọ ndị a wapụtara n'akụkụ ọnụ ọnụ ugwu bụ ụfọdụ n'ime ihe nzuzo na-echere gị.
Anyị na-awụlikwa elu n'ime egwuregwu aghụghọ na ndọrọ ndọrọ ọchịchị ịme anwansị con Imeri 2, egwuregwu na-atọ ụtọ nke ị ga - eji “duru mba gị site na oge ọchịchị ndị ọchịchị zuru oke na mmalite narị afọ nke iri na itoolu, site na mmụba na ịchị mba, wee bụrụ ezigbo ike dị ukwuu na mmalite nke narị afọ nke XNUMX.»
Victoria 2 bụ egwuregwu dị egwu emere na oge colonial nke narị afọ nke XNUMX, bụ ebe onye ọkpụkpọ na-achịkwa mba, na-eduzi ya site na mmepụta ihe, mmezigharị ndọrọ ndọrọ ọchịchị, mmeri ndị agha na ịchị ọchịchị.
Ezigbo Esther Landmark Edition
"Agwaetiti nke ọzara ... onye furu efu ... ihe ncheta nke ihe ọghọm ... akwụkwọ nke onye nyocha na - anwụ anwụ dere." Ya mere bụ nke a ihe egwuregwu nke ị ga-abanye n'àgwàetiti dịpụrụ adịpụ na nke tọgbọrọ n'efu na-amalite njem na-eduzi site na olu nke na-agụ iberibe akwụkwọ ozi dị omimi.
SimCity 4 Ọkachamma Edition
SimCity 4 bụ a egwuregwu obodo kamakwa, "also na-enyekwa ya ndụ." Malite site n'ịwelite ugwu, ịkpụzi osimiri, na ịkwadebe ala maka oke okike gị, obodo mepere emepe ma bụrụ nke ezi uche dị na ya.
Ebube akụkọ ihe mere eme agha agha ị ga-edu ndị agha Napoleon site na nnukwu mkpọsa agha yas na ohere nke imegharị akụkọ ihe mere eme.
F18 Ntọala ụgbọelu
Xnumx siri ike
Pathzọ zuru ezu na edemede: Esi m mac » Mmemme Mac » Egwuregwu » Egwuregwu akwụ ụgwọ ndị kachasị ewu ewu maka Mac
Apple Music na - eduga n’ọnwa ndị ọrụ pụrụ iche kwa ọnwa nke Spotify na Pandora